ईश्वरकुमार मैनाली, Author at Shikshapatra
भएन खै भाइरल !
पछिल्लो समय ‘तीनपाते’ बोलको गीतका कारण चर्चाको शिखरमा पुगेका नवीन चौहान भाइरल प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्। उनी सबैलाई आफ्नो काममा ध्यान दिन आग्रह गर्छन्।
धुुनमा धनको गनगन
महेश खड्काको संगीतमा रहेको ‘प्रणय’ एल्बमको ‘पोखरा’ बोलको गीतलाई खरेलले अनाधिकृत रूपमा स्टेजहरूमा प्रयोग गरेको भन्दै सुवासले एक करोड क्षतिपूर्तिसहित उजुरी दिएका छन्।
फत्तेमानको ‘असीम’ अनुभव
जसोतसो दुई सन्तानलाई हुकाइन् श्रीमतीले । फत्तेमानलाई असीमकी श्रीमतीप्रतिको सम्मानले सधैं खुसी पनि दिन्छ । ‘असीम मरेको बाँचेको अत्तोपत्तो नहुँदा पति धर्ममा रहेर दुःख खेप्न जो–कोहीले कहाँ सक्छ ?’ फत्तेमान भन्छन्।
क्यूएफएक्स सिनेमाका सीईओ रोशन अडिजाका अनुुसार वार्षिक १ अर्ब ९ करोड ५० लाख हाराहारीको व्यापार मात्र नेपाली चलचित्रले गर्ने गरेको छ । जसमा राज्यले न्यूनतम १६ करोड ४२ लाख ५० हजार करबापत असुल गर्छ ।
हास्यास्पद नहोस् हास्यव्यंग्य
मह जोडीका अनेक प्रहसन र पन्तको ‘हिजोआजका कुरा’ मा समसामयिक विषयवस्तुुलाई हास्यव्यंग्यमा समेटियो । २०३७ सालपछि नेपाली हास्यव्यंग्यले विषयवस्तुको खोजी सुरु गर्न थालेको हाे।
पैसा बेच्ने पदमकाे पीडा
माल (पुराना पैसा) अझै पनि ग्राहकबाट नै आउँछ । पुराना पैसा लिने हो भनेर आउँछन् । मोल मिले लिन्छु । अर्डर आको पैसा पाएँ भने त महँगोमा पनि किन्नुपर्छ पदम पैसा देखाउँदै भन्छन्, ‘मसँग भारतको सन् १८१८ देखि नेपालका राजा वीरेन्द्र सम्मका पैसा छन।’
रङ्गमञ्चको मर्म मर्ला कि !
रङ्गमञ्चसँग भौतिक रूपमा टाढिंदाको उर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा छ, तर धेरै लामो समय यतिकै रहे त्यो उर्जा खेर जाला कि भन्ने डर पनि छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारकाे बहस चलाउने चलचित्र
ग्रामीण भेगको सरकारी विद्यालयको असली अनुहार सर्लक्कै उतारिएको चलचित्रले, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक विचलन र शिक्षामा कसरी व्यापारीकरण हुँदै आएको छ भन्ने विषयलाई छर्लङ्ग देखाएको छ।
सबै कमेडी पचाउने दर्शक छैनन् : विनायक कुईँकेल
ओहो ! विज्ञापन नगरौं, हाहा...। डिसिजन लिने कुरामा धेरै नै दोधारे छु । डिसिजन पावर राम्रो भएकी युवती भए हुन्छ । यस्तै भन्ने केही छैन । जीवन भनेको जिउँदै जाने हो । समयअनुसार बग्दै जाने हो ।
बन्दाबन्दीले कतिपय फिल्मकर्मीलाई भने अवसर पनि दिलाएको छ । चलचित्रमा गुणस्तरहीनताको अरोप खेप्दै आएका फिल्मकर्मीलाई सुधारका लागि ब्रेक आवश्यक थियो ।
‘नेपाली धुन विश्वलाई सुनाउनेछौं…’
घर सुनसान थियो । छिमेकीलाई सोधखोज गर्दा थाहा भयो, उनी त बिदेसिएका रहेछन् । सुदर्शनको मन खिन्न भयो । बाँसुरीको त्यति मिठो धुन निकाल्न सक्ने कलाकारले किन बिदेसिनुपर्‍यो होला ?
जो गुरुआमालाई फकाउन गाउँथे
आफूलाई अल्छि स्वभावको मान्ने प्रवीण पढाइलाई त्यति महत्व दिदैनँथिए । अल्छि नातीलाई पढाइमा लत बसाउन प्रविणकी हजुरआमाले युक्ति निकालिन्–‘पहिलो भइस् भने क्यामेरा भएको मोबाइल किन्दिन्छु ।’ त्यसपछि प्रवीण क्यामेरावाला मोबाइलको लोभले पढ्न थाले । फलतः जिल्लास्तरीय परीक्षा टप गरे ।
गोविन्द सरको अँध्यारो संसार, उज्यालो दृष्टि
त्यसपछि उनले शिक्षाशास्त्र सङ्कायमै स्नातकोत्तर पूरा गरे । त्यतिले मात्र उनको आँत भरिएन, मानविकी संकाय पढ्न थाले । दुई विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरे ।
सज्जाकाे साङ्गीतिक उडान
‘नेपाल आइडलको अडिसनमै नछानिएको भएपनि गीत संगीतबाट टाढा त कहाँ जान सक्थेँ र ?’ उनी भन्छिन् ‘तर, केही समयका लागि म प्रत्यक्ष रुपमा भने जोडिन पाउने थिइन होला । तर अब त्यस्तो हुने छैन ।’
त्रिविः जहाँ १४ वर्षदेखि दैनिक ज्यालामा पढाइरहेछन् प्राध्यापक
अहिले त्रिविमा २ हजारको हाराहारीमा यस्ता आंशिक शिक्षक रहेको अनुमान छ । उनीहरुमध्ये १४ वर्षदेखि पढाइरहेकाहरु पनि छन् । उनीहरुले त्रिविको पाठ्यभारको ६० प्रतिशत भार धानेका आंशिक प्राध्यापक संघले जनाएको छ ।
अनलाइन संगीत सिकाउँदै मेनुका
संगीत विद्यालय खोल्ने सपना बुनेकी उनले विश्वविद्यालयको पढाइ अनलाइनबाट शुरु हुने भन्ने खबर सुनेपछि संगीत पनि अनलाइनबाटै अघि बढाउन सकिने निष्कर्षसहित काम थालेकी हुन् ।
ईश्वरकुमार मैनाली | काठमाडाैं संग्रह
राजनीतिमा युवा आकर्षण
युवानेता भन्छन, 'राजनिती सुधार गर्न शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार गरी, विद्यालयदेखि नै राजनीतिप्रतिको धारणालाई सकारात्मक बनाउँदै लानुपर्छ ।'
सीप भए देशमै छ रोजगारी
विदेशमा देश छैन, त्यसकारण लाज छैन । यहाँ देश छ, लाज छ । अरु केही होइन । विदेशमा जसरी यहाँ खटिने हो भने पैसा मजाले कमाउन सकिन्छ । भारतीयहरु कति मेहनती छन् ।
वैकल्पिक शिक्षामा सरकारकाे लगानी बालुवामा पानी !
कोभिड १९ का कारण ठप्प भएको शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले गरेको वैकल्पिक शिक्षाको करोडौं रुपैयाँ प्रभावहिन भएको पाइएको छ । धुमधामले चर्चा भएपनि ‘वैकल्पिक सिकाइ’ प्रभावहिन भएको हो ।
किन बनेनन् नेपालमा शिक्षाका विषयमा चलचित्र ?
निर्देशक र चलचित्रकर्मीले शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयवस्तुुमा चलचित्र बन्नुपर्ने र यसमा लगानी सुरक्षित हुुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सके लगानीको समस्या नहुने बंशलको दाबी छ ।